အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောအော်ရီဂရီနှင့်အဂရီဂျီများကိုလေ့လာပါ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အော်ရီဂရီသို့မဟုတ် Origami
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကအော်ဂရီမီသို့မဟုတ် Origami အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်စက္ကူလေယာဉ်တွေ၊ လှေတွေ၊ ကလေးဘဝတုန်းကငါကြိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းပြောရုံတင်မကဘူး။ အိမ်မှကလေးငယ်များအတွက်အော်ဂရီမီသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးစံပြဖြစ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြချင်ပါသည်။ ကလေးတွေအတွက် origami ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ကလေးများသည်ကိန်းဂဏန်းများစွာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ရန်ဤအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်နေသည်။
ငါထင်တယ် စက္ကူလေယာဉ်ပျံ ၎င်းသည်လေးလည်စည်းနှင့်အတူအော်ရီဂရီနှင့်ပထမဆုံးလူတစ် ဦး ဦး ၏ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်တစ်ခုဖြစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါကသင်သည်စက္ကူလေယာဉ်အမျိုးအစားများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးကလေးတစ် ဦး ပြုလုပ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသောအခါကလေးများကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ ငါလေယာဉ်ပျံနှင့်အတူစတင်စက္ကူလေယာဉ်အမျိုးအစားများကိုအများကြီးစေပြီ။
အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ဘလော့ဂ်မှာမင်းကိုပြသဖို့သတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ မင်းငါငါလုပ်ပေးသလောက်နှစ်သက်တယ်။
2018 ခုနှစ် Dodecahedron ပြက္ခဒိန်များ
သင်ရှာနေခဲ့လျှင် သင်၏စားပွဲခုံအတွက်ပြက္ခဒိန် ၂၀၁၈ အတွက်ကောင်းမွန်ပြီးစျေးပေါ။ တည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူသည် dodecahedrons လုပ်ရန်ဤ printable template များနှင့်ဘာမျှမတူပါ။ သင်ထင်ခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်းပုံမှန်အနား၏မျက်နှာ ၁၂ မျက်နှာရှိသည်။ တစ်လတွင်တစ်ခုစီရှိသည်။ :) သူ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောခဲ့သည် ထာဝရပြက္ခဒိန်သစ်၊ စက္ကူနှင့်ကတ်ထူပြားများတွင်ကောင်းမွန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးရှိအသင်းတော်များအတွက်တင်းပလိတ်များကိုအောက်ပါတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည် အွန်လိုင်း tool ကိုအလွန်အလိုလိုသိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ အကြောင်းပါ dodecahedron ပြက္ခဒိန်မီးစက်.
အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်ပြသသော dodecahedra အမျိုးအစားနှစ်မျိုး၊ ပြက္ခဒိန်နှစ်၊ ဘာသာစကား၊ သင်ရက်သတ္တပတ်နံပါတ်ပေါ်လာရန်သို့မဟုတ်မလိုချင်ပါက၎င်းကို PDF ပုံစံထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ပို့စ်ကူးရေးရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ။
Star Wars ဆီးနှင်းပြုလုပ်နည်း
ဒီခရစ္စမတ်နဲ့မတူတော့ဘူး။ ငါရှင်းနေပြီ။ အိမ်တွင်ခရစ်စမတ်အလှဆင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ ... အပေါ် Read
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အကောင်းဆုံး Tools တွေကို ရွေးချယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ origami အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ လက်ရှိတည်ရှိ။
အတွက် origami ချစ်သူများ သို့မဟုတ် Origami သည် အလေ့အကျင့်အနည်းငယ်ဖြင့် သင့်အား အခြားအဆင့်သို့ပို့ဆောင်ပေးမည့် မတူညီသောအခမဲ့ပရိုဂရမ်များကို ယူဆောင်လာပေးပါသည်။ Origami ဂျေဒီ.
အ origami အတွက်ဒီဇိုင်းပရိုဂရမ်များ ဒီဆောင်းပါးကို ဖန်တီးပြီးကတည်းက သူတို့ အများကြီး တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းထားသည့်အရာများသည် အသုံးမပြုတော့ခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်း ပိုမိုအားကောင်းပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ရွေးချယ်စရာများ ထွက်လာပါသည်။
ဤပရိုဂရမ်အမျိုးအစားကို နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာကြည့်လျှင် ၎င်းတို့အခြေခံထားသည့် သင်္ချာများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိနားလည်ပါသည်။ Origami ၏ သင်္ချာသီအိုရီကို လေ့လာရန် ဇောက်ချလုပ်ကိုင်နေသူများ ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ဒီဇိုင်းကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည့် ဤအသိပညာဖြစ်သည်ကို ပြောရခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အသေးအဖွဲကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် ဦးစားပေးပုံသဏ္ဍာန်ထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင်း သင်တွေ့ရပါမည်။
အခြား လေယာဉ် ငါတို့လုပ်နေတဲ့စက္ကူလေယာဉ်ပျံစုဆောင်းမှုအတွက်ပိုများပါတယ်။
အဲဒါရိုးရှင်းပါတယ် စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ glider ။
စက္ကူ pinwheel တစ်ခုလုပ်နည်း
အလွန်အခြေခံကျပြီးရိုးရှင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်ထင်သည် အော်ဂရီဂျီသို့မဟုတ်အော်ဂရီမီယမ် တစ် ဦး pinwheel အောင်ကဲ့သို့ရှိရမည်။
ပုံမှယူသည် Paliku ၏ကမ္ဘာ
ကျွန်တော်တို့ဟာ origami လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ စက္ကူကဏန်းလုပ်နည်း။ ကဏန်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုအဓိကတွေ့ရှိရသည်။ သင်အနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုရွေးပါ။ ဗွီဒီယိုတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ချန်ခဲ့တယ်
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 2010 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တင်ခဲ့သော မူရင်းဗီဒီယိုများကို ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ပို၍ကောင်းမွန်သော ဗီဒီယိုများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့သည် မတူညီသော စက္ကူကဏန်းအမျိုးအစားများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဒါကြောင့် ဆောင်းပါးကို နှစ်သက်တဲ့ အနည်းငယ်နဲ့ အပ်ဒိတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ
သို့သော်လည်းငါသည်ဤလှုပ်ရှားမှု၏အဆင့်သည်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်မစိတ်မပျက်ပါနှင့် ။-) ဗွီဒီယိုများတွင်ယင်း၏မော်ဒယ်လ်အတွက်အသေးစိတ်အဆင့်ဆင့်ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သငျသညျပါဝင်ပတ်သက်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းသောခြေလှမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်ဗီဒီယိုကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကအများကြီးအကူအညီပါပဲ။
ထက်ပိုပြီး ကိုယ့်က၎င်း၏စက္ကူ autogyro ထင်ရဟတ်ယာဉ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အပန်းဖြေခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမေပယ်၏အစေ့များပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယူဆချက်များနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။
၁၁-၂၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနှစ်များအတွင်းစက္ကူလေယာဉ်ပျံသန်းမှုတွင်အောင်မြင်သောမှတ်တမ်းအသစ်များထပ်ထည့်သည်။ မှတ်တမ်း ... အပေါ် Read
Página1 Página2 အောက်ပါ →